မောင်မောင်စိုး ● တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် လျှပ်စစ်စွမ်းအင် | MoeMaKa Burmese News & Media
(မိုးမခ) ဇွန် ၁၉၊ ၂၀၁၆
● လျှပ်စစ်စွမ်းအင်အတွက် ဘတ်ဂျက်လိုငွေပြဿနာ
အထက်တွင်ဖော်ပြသည့်အချက် ၄ ချက်တွင် ပထမအချက်နှင့် စတုတ္ထအချက် လျှပ်စစ်စွမ်းအင် အတွက် သုံးစွဲရမည့်ငွေကြေးအခြေအနေကို ဖော်ပြသည်။ လက်ရှိမြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးအရ လက်ရှိ ကောက်ခံနေသည့်မီတာခမှာ ထုတ်လုပ်သည့်စားရိတ်နှင့်မကာမိပေ။ လက်ရှိ အစိုးရက ထုတ်လုပ်သည့်ရေအားလျှပ်စစ်အား ဖြန့်ချိသူများသို့ ပြန်လည်ရောင်းချသည့်ဈေးမှာ ၂၅/၃၅ ကျပ်ဟုဆိုသည်။ ဤသို့ ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်နိုင်ခြင်းမှာ ထုတ်လုပ်သည့် ကုန်ကျစားရိတ်ကိုသာတွက်ချက်ထားပြီး အရင်းအနှီးကို ထည့်တွက်မထား၍ ဖြစ်သည်။ အစိုးရရေအားလျှပ်စစ်မှမလုံလောက်၍ ပုဂ္ဂလိက ထုတ်လုပ်သူများထံမှ အစိုးရကပြန်လည်ဝယ်ယူဖြန့်ချိရသည့်နှုန်းမှာ ရေအားလျပ်စစ်မှဆိုလျင်၁ ယူနစ် ၁၀၀ ကျပ် ကျောက်မီးသွေးနှင့်ဆိုလျှင် ၁ ယူနစ် ၁၅၀ ကျပ်ရှိပြီး သဘာဝဓာတ်ငွေနှင့်ဆိုလျှင် ၁ ယူနစ်လျှင် ၂၀၀ ကျပ် ကျသင့်သည်ဟုဆိုပါသည်။ အစိုးရပိုင်သဘာဝဓာတ်ငွေ့စက်ရုံများမှ လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရာတွင် တယူနစ်ထွက်ရှိရန် သဘာဝဓာတ်ငွေ့အတွက် ကုန်ကျငွေ ၁၀၀ ကျပ်ခန့် ရှိသည်ဟု ဆိုပါသည်။
သို့ဖြစ်ရာ လက်ရှိပြည်တွင်း၌ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခနှင့်တွက်ချက်လျှင် အစိုးရအနေနှင့် လျှပ်စစ် ဓာတ်အားပေးရေးအတွက် ဘတ်ဂျက်မှ စိုက်ထုတ်သုံးစွဲရငွေ မနည်းလှပေ။ လျှပ်စစ်ယူနစ်တိုင်း ယူနစ်တိုင်းအတွက် နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်မှ ကျခံနေရသည်။ အစိုးရအနေနှင့်လျပ်စစ်ကို စီးပွား ဖြစ်ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းမျိုးမရှိဘဲ ဘတ်ဂျက်မှ စိုက်ထုတ်သုံးစွဲနေရသည်ဟုဆိုရမည်။ သို့ဖြစ်ရာ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်မှ ဝင်ငွေမရသည့်ပြင် စိုက်ထုတ်သုံးစွဲနေရသဖြင့် အကျိုးဆက်အနေနှင့် စတုတ္ထအချက်ဖြစ်သည့် လျှပ်စစ်ပို့ဆောင်သွယ်တန်းသည့် ကြိုးများကြွေသီးများအပါ လျှပ်စစ်ဖြန့်ဖြူးရေး နှင့် ဆက်စပ် နေသော ပစ္စည်းများအားလုံး အရေအသွေးနိမ့်ခြင်း အသစ်မလဲလှယ်နိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် လျှပ်စစ်ဆုံးရှုံးမှုများ လျပ်စစ်ပြတ်တောက်မှုများကို ထိမ်းသိမ်းနိုင်ခြင်းမရှိပေ။
ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနည်းသည့်နိုင်ငံဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ ဘတ်ဂျက်ကလည်း မဖြည့်နိုင်။ ထို့ပြင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအတွက် အမှန်တကယ် ကျသင့်ငွေအတိုင်း လူထုအား ကောက်ခံရန်မှာလည်း လူထုဝင်ငွေအရ မထိရဲ မတို့ရဲ ဖြစ်နေသည်ဟုဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခတိုးမြှင့်ပါက လူထုဝင်ငွေအရ မနိုင်နင်းခြင်း အခြေခံစားသောက်ကုန်များကုန်ဈေးတက်၍ လူထုအထွေထွေမကြေနပ်မှုများဖြစ်ပေါ်ပြီး ဆူပူအုံကြွမှုများဖြစ်ခြင်းကို စိုးရိမ်ကြသည်ဟု ဆိုသည်။
မိမိတဦးချင်းအမြင်အရဆိုလျှင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခအား မူအရတိုးကောက်သင့်သည်။ လက်ရှိပြဿနာကို ကျော်လွှားနိုင်ရန် အစိုးရရော ပြည်သူပါလက်တွဲ၍ ရုန်းကန်ရမည်။ အစိုးရက ရဲရဲတင်းတင်း ဦးဆောင်၍ လူထုအား အခြေအနေကိုမှန်မှန်ကန်ကန် ရှင်းပြပြီး စည်းရုံးရှေ့ဆောင်ရန် လိုသည်။
အစိုးရအနေနဲ့ ဤပြဿနာကို ယခင်အစိုးရများကဲ့သို့ အမိန့်ကြေညာစာတခု ထုတ်ပြန်ပြီး လုပ်ဆောင်၍တော့မရပေ။ လူထုအား ချပြရှင်းလင်းဆွေးနွေးစည်းရုံးရမည်ဖြစ်သည်။ လူထုကိုကိုယ်တိုင် လက်ရှိအကြပ်အတည်းကို အတူတကွ ရုန်းကန်ကျော်လွှားရန် စည်းရုံးရှေ့ဆောင်ရမည်။ အစိုးရအနေနှင့် တိုး၍ရလာသည့် ငွေကြေးများကို လျှပ်စစ်စွမ်းအင် ကဏ္ဍတွင် မှန်မှန်ကန်ကန် ပြန်လည်မြှုပ်နှံရပေမည်။ စာရင်းဇယားများထုတ်ပြန်၍ လူထုအားအသိပေး၍ လူထုထောက်ခံမှုရယူရမည်။
ဒီမိုကရေစီအစိုးရဆိုသည်မှာ အခွန်အခများဖြင့်သာ လည်ပတ်ရသည့် အစိုးရဖြစ်သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ မြန်မာပြည်တွင် အခွန်အကောက်စနစ်မှန်ကန်စွာ ကောက်ခံလည်ပတ်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ တိုင်းပြည်သယံဇာတအားလုံးအား နိုင်ငံတော်ဟုနံမည် တပ်ကာ အစိုးရကလက်ဝါးကြီးအုပ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ သည်ဖြစ်ရာ အပြောင်းအလဲသည်ခက်ခဲပေမည်။ သို့သော် မလွဲမသွေဖြတ်ကျော်ရပေမည်။ NLD အစိုးရသစ်အတွက် ပို၍ ခက်ခဲမည့်အချက်မှာ ဤအချက်ကို အခြေပြု၍ ဆန့်ကျင်သည့်အုပ်စုများမှ ထိုးနှက်လာမည်ကို သတိပြုရမည်ဖြစ်သည်။
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတိုး၍ ကောက်ခံခြင်းသည် လက်တွေ့တွင်လည်း ကောက်ခံ၍ ရသည်ဟုဆိုရမည်။ လက်ရှိ အလယ် အလတ်နှင့် အောက်လွှာမိသားစုများ၏ မီတာခ ကုန်ကျမှုကိုကြည့်လျှင် လျှပ်စစ်ဖြင့် ချက်ပြုတ်ခြင်းမီးထွန်းခြင်း၊ တီဗီကြည့် ခြင်း ပြုလုပ်သည့်အိမ်များတွင် ပုံမှန် မီတာခသည် ၅၀၀၀ ကျပ်မှ ၁၀၀၀၀ ကျပ်ကြား ရှိပါသည်။ အလတ်အထက်လွှာနှင့် ချမ်းသာသူများကတော့ ၎င်းတို့၏ လျှပ်စစ် ပစ္စည်းများ သုံးစွဲမှု လေအေးပေးစက်သုံးစွဲမှုတို့ကြောင့် သုံးလျှင် သုံးသလောက် မြင့်မည်သာ ဖြစ်သည်။
သို့ဖြစ်ရာ လက်ရှိလူထုကို ဖြန့်ဖြူးနေသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဈေးကို နှစ်ဆမြှင့်တင်သည့်တိုင် အလယ်အလတ်နှင့် အောက် လွှာမိသားစုများအတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကျသင့်ငွေမှာ တအိမ်ထောင်လျှင် ၁၀၀၀၀ ကျပ်မှ ၂၀၀၀၀ ကျပ်အထိသာ ကျသင့်မည်ဖြစ်ရာ သည်းခံနိုင်သည့် ပမာဏဟု ဆိုနိုင်သည်။
လက်ရှိ လူတဦးချင်း မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးစွဲရာတွင် ဖုန်းတလုံးချင်း ဖုန်းသုံးစွဲခကျသင့်ငွေနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ကျခံနိုင်သည့်ငွေဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။
အလတ်အထက်လွှာနှင့် ချမ်းသားသူများ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းသုံးစွဲမှုများသူများသာ ပို၍ကုန်ကျနိုင်မည်။ မိမိအိမ်တစ်လုံးအတွက် လေအေးပေးစက်၁၀ လုံးခန့် သုံးနိုင်သူများအတွက် ကုန်ကျသလောက် ကုန်ကျခံရမည်သာဖြစ်သည်။ ထိုသူတို့အတွက် အားနာသက်ညှာစရာအကြောင်းမရှိပေ။ မီတာခအကုန်မခံနိုင်လျှင် လျော့၍သုံးကြရန်သာရှိသည်။ မိမိတို့တိုင်းပြည်တွင် ရှိခဲ့သော သူဌေးကြေးပံ့သည့် ဖြစ်စဉ်တခုအား ပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်စေလိုသည်။ လက်ရှိ ဒီဇယ် ဓာတ်ဆီများကို လွတ် လပ်စွာ ရောင်းဝယ်ခွင့်မပြုမီကာလက အစိုးရဆီဆိုင်များမှ ဆီများအား အပြင်ပေါက်ဈေးထက်များနိမ့်သည့် အစိုးရဈေးနှင့် သတ်မှတ်ရောင်းချပေးခဲ့သည်။ နိုင်ငံခြားပေါက်ဈေးထက် အရှုံးခံကာ ရောင်းပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုအရှုံးခံသည့်ငွေဆိုသည်မှာ တိုင်းပြည်ဘတ်ဂျက်မှ စိုက်ထုတ်ကျ ခံပေးရ ခြင်း ဖြစ်သည်။ ငွေကြေးချမ်းသာ၍ ကိုယ်ပိုင်ကားဝယ်စီးနိုင်သူများအား ထိုသို့ အများပြည်သူနှင့် ဆိုင်သော တိုင်းပြည်ဘတ်ဂျက်မှ စိုက်ထုတ်ကျခံပေးရန် လိုအပ်ပါသလော။ ဆင်းရဲသောနိုင်ငံတနိုင်ငံတွင် အခြေခံလူတန်းစားများအား မျက်ကွယ်ပြု၍ သူဌေးကြေး ပေးခဲ့ကြသည်ကတော့ စိတ်ပျက်ဖွယ်ဖြစ်သည်။
ယခုလည်း မိမိ၏ငွေကြေးချမ်းသာမှုကြောင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများစွာ အသုံးပြုခြင်း လေအေးပေးစက် များစွာ အသုံးပြုခြင်း ပြုနိုင်သူ အလတ်အထက်လွှာနှင့် ငွေကြေးချမ်းသာသူများသုံးစွဲသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခအား နိုင်ငံတော် ဘတ်ဂျက်မှ စိုက်ထုတ်သုံးစွဲစရာမလိုအပ်ပေ။
အခြေခံနှင့် အလယ်အလတ်လူတန်းစားများအတွက်ဆိုလျှင် လူ ၄ ဦးရှိသော အိမ်ထောင်တခုလျှင် ချက်ပြုတ်ခြင်း၊ မီးထွန်း ခြင်း၊ တီဗီကြည့်ခြင်းတို့အတွက် လက်ရှိမီတာခနှင့်ဆိုလျင် ၅၀၀၀ ကျပ်ခန့်သာကျပြီး အဆိုပါအခြေခံလျှပ်စစ်ပစ္စည်းအပြင် ရေခဲသေတ္တာ အဝတ်လျှော်စက် လျပ်စစ်မီးပူနှင့် မီးဖိုချောင်သုံး လျှပ်စစ်ပစ္စည်းအချို့သုံးမှ ၁၀၀၀၀ ကျပ်ခန့်ကျသင့်သည်။ သို့ဖြစ်ရာ မီတာခ ၂ ဆတက်ပါက ဝင်ငွေအရ၎င်း၊ ရေရှည်အတွက်၎င်း ကြိတ်မှိတ်ခံနိုင်ပါသည်။ အလတ်အထက်လွှာနှင့် ချမ်းသာသူများ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းအသုံးများအတွက်တော့ ပို၍ ကျသင့်မည်။ လေအေးပေးစက် တကောင်အားတလုံးအတွက် လက်ရှိမီတာခနှင့်ဆိုလျှင် ၁၀၀၀၀ ကျပ်ခန့် ကျသင့်ပေရာ ထိုသူများအတွက် မီတာခအတော်တက်သွားမည် ဖြစ်သည်။ ငွေကြေးတတ်နိုင်၍ ကောင်းကောင်းသုံးစွဲလိုသူများ ထိုက်သင့်သောငွေကြေးပေးဆပ်ရခြင်းမှာ တန်ရာတန်ကြေး ပေးခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ မပေးလိုက လျှော့သုံးစွဲရန်သာရှိပေသည်။ လေအေးပေးစက် ၅ လုံး သုံးနိုင်သည့် အိမ်တအိမ်တွင် ၎င်းလေအေးပေးစက်များအတွက် မီတာခ ၅၀၀၀၀ မှ တစ်သိန်းကျပ် ဖြစ်သွားခြင်းသည် သူ၏သုံးစွဲနိုင်သည့်ငွေကြေးနှင့်သာဆိုင်သည်။ အခြေခံနှင့် အလယ်အလတ်လူတန်းစားများကဲ့သို့ လိုအပ်ချက် ပြဿနာမဟုတ်ပါချေ ။
တဖန် လုပ်ငန်းရှင်များအား လက်ရှိကောက်ခံနေသည့် မီတာခမှာ ၇၅ ကျပ်မှ ၁၅၀ ကျပ်အထိ ရှိပေရာ ၎င်းတို့အတွက် မီတာ ခသည် နှစ်ဆတက်ရန် လိုအပ်မည်မဟုတ်ပေ။ ရာခိုင်နှုန်းအချို့သာ တက်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် လျှပ်စစ်ဓာတ် အားတိုး၍ ကောက်ခံမှုအရ ကုန်းဈေးနှုန်း ၂ ဆတက်လာ နိုင်မည်မဟုတ်သကဲ့သို့ အခြေခံလူတန်းစာများလည်း တောင့်ခံနိုင်သည့် အခြေအနေရှိသည်ဟု ဆိုရပါမည်။
သို့ဖြစ်ရာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်စားရိတ်နှင့် ကာမိသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခ တိုးမြှင့် ကောက်ခံ ခြင်းသည် လျှပ်စစ် စွမ်းအင်နှင့်ပတ်သက်၍ ဘတ်ဂျက်ပြဿနာဖြေရှင်းရန်နှင့် လျှပ်စစ်ဖြန့်ဖြူးရေး လုပ်ငန်းများတွင် ဘတ်ဂျက်တိုးမြှင့်သုံးစွဲနိုင် ရန် ရဲရဲတင်း တို့ထိရမည့်ပြဿနာဖြစ်သည်။ အစိုးရကရဲရဲဆုံးဖြတ်ခေါင်းဆောင်၍ လူထုအားစည်းရုံးလှုံ့ဆော်နိုင်လျှင် မလုပ် နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဟု ဆိုရပါမည်။ ထို့ပြင် ပြည်မထက်များစွာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခမြင့်တက်နေသော တနင်္သာရီ ရခိုင်ပြည်နယ်တို့နှင့်လည်း ကွာခြားချက်လျော့ကျ သွားပေမည်။
● လျပ်စစ်စွမ်းအင်နှင့် တိုင်းပြည်ဘတ်ဂျက်
အစိုးရအနေနှင့်လည်း တိုင်းပြည်ဘတ်ဂျက်ရေးဆွဲရာတွင် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရေးတွင် အလေးထားရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်လိုသည်။ ကာကွယ်ရေး ပညာရေး ကျန်းမာရေး စသည့် မလွှဲမရှောင်သာ ကုန်ကျရမည့် ဘတ်ဂျက်များအမှ ကျန်သည့် ဘတ်ဂျက်များ သုံးစွဲရာတွင် လျှပ်စစ်စွမ်းအင် ထုတ်လုပ်ရေးတွင် အလေးထားလုပ်ဆောင်သင့်သည်။
ဥပမာအားဖြင့် မကြာမီက သတင်းတခုတွေ့ရသည်။ ၎င်းသတင်းအရ ရန်ကုန် မန္တလေးရထားလမ်းကြီး ကို အဆင့်မြှင့်တင်ရန် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂ ဘီလီလျံကျော်တန်သည့် တင်ဒါခေါ်ဆိုသွားမည်ဟု ဆိုသည်။ ဤသို့ ပြင်ဆင်လိုက်ပါက ရန်ကုန် မန္တလေး ၈ နာရီခန့်နှင့် ရောက်မည်ဟုဆိုသည်။
အမှန်တကယ်ပင် မီးရထားဖြင့်သွားလာခြင်းသည် လုံခြုံစိတ်ချရ၍ လူများသက်တောင့်သက်သာ ရှိသည်အမှန်ပင် ဖြစ်သည်။ အလားတူ ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရာတွင်လည်း သက်သာစေသည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။
သို့သော် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် မလုပ်မဖြစ်တော့မဟုတ်ချေ။ လောလောဆယ် ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးကြား မနက်မိုးလင်းမှ ညမိုးချုပ်ထိ အဝေးပြေးကားလိုင်းများစွာထွက်နေရာ မီးရထား၏ လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်စွမ်းနိုင်အားရှိသည်။ ဖြည့်စွမ်းနိုင်ခြင်းမရှိသည်မှာ လျပ်စစ်စွမ်းအင် ကဏ္ဍဖြစ်ပေရာ အဆိုပါ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂ ဘီလီလျံအား လျပ်စစ်စွမ်းထုတ်လုပ်ရေးတွင် ဦးစားပေးသုံးသင့်သည်။
ထို့ပြင်မြန်မာမီးရထား၏ပြဿနာသည် ရန်ကုန်မန္တလေး မီးရထား သက်သက်မဟုတ်ပေ။ မြန်မာ တနိုင်ငံလုံးရှိ မီးရထားသွား လာရေးစနစ်ကြီး တခုလုံးကို ပြောင်းလဲပစ်ဖို့ဖြစ်သည်။ သို့အတွက် မြန်မာ့ မီးရထားတွင် အစိုးရကထပ်မံရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းထက် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတခုဖိတ်ခေါ်၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံစေကာ အစိုးရနှင့် ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းလိုအပ်လျင်အစိုးရပိုင်ရှယ်ရာများကိုပင် အများပြည်သူသို့ ရောင်းချခြင်းမျိုးဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စ ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ လက်ရှိ မီးရထားစနစ်ကို မွမ်းမံခြင်းထက် မီးရထားစနစ်တခုလုံးပြောင်းလဲရန် လိုအပ်သည်။
သို့ဖြစ်ရာ အစိုးရအနေနှင့် တိုင်းပြည်ဘတ်ဂျက်ရေးဆွဲရာတွင် အခြားအရာများထက် လျှပ်စစ် စွမ်းအင်ကဏ္ဍရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးကို ဦးစားပေးရမည် ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် တိုင်းပြည်၏ မူလစီးပွားရေး ကဏ္ဍအချို့အား ဖာထေးပြုပြင်ခြင်းထက် လိုအပ်သည့် အပြောင်းအလဲလုပ်ရန် စဉ်းစားဖို့ လိုသည်။ အရပ်စကားနှင့်ပြောရလျှင် ဆင်ဖိုးထက် ချွန်းဖိုးကြီးနေသောပြင်မဆုံးသည့် ကားစုတ်ကိုပစ်၍ ကားအသစ်ကို ဝယ်စီးသည်က မိမိအတွက် စီးပွားရေးတွက်ခြေကိုက်ပေမည်။
● လူထုအားအခြေပြု ခြင်း
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခများ တက်ရန်လိုအပ်သည့်ကိစ္စဖြစ်စေ လျှပ်စစ်စွမ်းအင် ထုတ်လုပ်ရေးကိစ္စဖြစ် စေ အောင်မြင်ပေါက်မြောက်နိုင်စေရန် လူထုအားအခြေပြုရန်လိုအပ်သည်။ မိမိတို့တိုင်းပြည်အစိုးရအနေနှင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ ဥပဒေကဲ့သို့ အာဏာတည်သော အမိန့်များနှင့်သာ ယဉ်ပါးခဲ့သည်။ လူထုကိုမျက်နှာမမူခဲ့သကဲ့သို့ လူထုကိုစည်းရုံး သိမ်းသွင်းခြင်းလည်း မပြုခဲ့ပေ။
လက်ရှိ တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်လိုအပ်သည့် ပြဿနာ၊ ရေအားလျှပ်စစ် စက်ရုံဆောက်လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်ပြဿနာ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပြဿနာ၊ ဒေသခံလူထု အကျိုးစီးပွားပြဿနာ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလုပ်ရာ တွင် ကုန်ကျသည့်စားရိတ်နှင့် ဓာတ်အားခ အမှန်တကယ်တိုးကောက်ရန်လိုအပ်သည့်ပြဿနာများကို နိုင်ငံရေးပါတီအဖွဲ့ အစည်းများ အရပ်ဖက်အဖွဲ့ အစည်းများ ဒေသခံလူထုအဖွဲ့အစည်းများ အားအခြေပြု၍ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ လူထုဆွေး နွေးပွဲများ အစည်းအဝေးများကို အောက်ခြေလူထုအထိ ရောက်အောင်ပြု လုပ်၍ လူထုကိုယ်တိုင် နားလည်သဘောပေါက် အောင် ကြိုးစားစွမ်းဆောင်သင့်သည်။ တိုင်းပြည်အခက်အခဲရှိချိန် ရည်မှန်းချက်တခု ပေါက်မြောက်အောင်မြင်ရန် တိုင်းသူ ပြည်သားအားလုံး ခါးစီး၍ လုံးပမ်းအားထုတ်ဖို့ဆိုသည်မှာ လူထုကိုယ်တိုင် သဘောပေါက်ပါဝင်ကြဖို့လိုပါသည်။ လူထုအ ခြေပြု အစိုးရတရပ်အနေနှင့် လူထုအားစည်းရုံးရှေ့ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ လူထုအားစည်းရုံးရှေ့ဆောင်နိုင်လျှင် လွယ် ကူစွာ ပေါက်မြောက် အောင်မြင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
ထိုသို့လူထုအား ချပြဆွေးနွေးရှင်းလင်း စည်းရုံးခြင်းသည် အရေးကြီးသည်။ မြန်မာပြည်၏ လက်ရှိ နိုင်ငံရေးအစဉ်အလာအရ စစ်အစိုးရ ဘာလုပ်လုပ် ဆန့်ကျင်ကြသည့် ခေတ်ကာလတခုရှိခဲ့သလို ယခုအချိန်တွင်လည်း NLD အစိုးရ ဘာလုပ်လုပ် ဆန့်ကျင်မည့် အင်အားစုအချို့ရှိနေပေရာ လူထုအများစု၏ ထောက်ခံရရန် အရေးကြီးပါသည်။ အစိုးရနှင့် လူထုကင်းကွာ ခဲ့သောခေတ်၏ သင်ခန်းစာများအရ အစိုးရနှင့်လူထု တသားထဲရှိပါမှ အောင်မြင်နိုင်မည်ကို အလေးထားဖို့လိုပါသည်။
မြန်မာပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကြီးမားသောစွမ်းအင်လိုအပ်ချက်သည် အလွန်အရေးကြီးသည်ကို အစိုးရရော လူထုပါ သဘောပေါက်စွာဖြင့် ဝိုင်းဝန်းကြံဆောင်ကြဖို့ လိုပါသည်။ မီးပျက်၍ စိတ်ပျက်နေရုံနှင့်မပြီးပေ။
အစိုးရရော လူထုပါ ဝိုင်းဝန်းအဖြေရှာဖို့ လိုပါသည်။ မတူသောအမြင်များ ကွဲလွဲမှုအမြင်များ ရှိနိုင်ပါသည်။ လူထုအများစု လက်ခံနိုင်သည့် အဖြေတခု ရှာဖို့တော့ လိုပါသည်။
One Response to မောင်မောင်စိုး ● တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်
yekyawthu on June 19, 2016 at 8:24 pm
Our people do not have chance to enjoy the profits form the sale of Jade, Gas and Teak. So please let them have cheaper cost for electrical and water bills. These are their only luxury at home. But charge more on those who uses the electrical power excessively ( super markets, restaurants , Petrol stations and even home which use the energy in exaggeration). In some European countries the electricity is cheaper for those who use during the nights but those who use during the day have to pay more)